Ifektri yethusi eshibhile nabaphakeli | I-Ouzhan
Insimbi engeyona eyensimbi yokuphonsa izinsimbi-izingxenye ezenziwe ngokwezifiso zethusi
Kwethusi lokusakaza, ithusi le-manganese, i-aluminium ithusi, i-silicon yethusi, ithusi lokuhola, njll kwenziwa ngokwengeza ezinye izinto ezihlanganayo. Ama-alloys ethusi angenayo i-zinc njengoba isici esiyinhloko ngokuhlangene abizwa nge-bronze, njenge-tin bronze, i-aluminium bronze, i-lead bronze, ne-beryllium bronze. Ezingeni likazwelonke, kunezinhlobo eziyi-9 zama-alloys ethusi, kufaka phakathi amamaki angama-29. Ekubunjweni yethusi ingxubevange uhlobo ekubunjweni ingxubevange impahla esetshenziswa kakhulu embonini. Ama-alloys asuselwa ethusi asetshenziswa kakhulu ezimbonini zokwakha imikhumbi nezamakhemikhali ngenxa yokumelana nokugqwala okuhle emanzini amasha, amanzi olwandle kanye nezixazululo ezithile zamakhemikhali. Ngenxa yokuhamba kahle kokushisa kwayo nokuqina kokugqokwa, ama-alloys asuselwa ethusi nawo asetshenziswa kakhulu ekwakheni ama-bushings ashibilikayo emishini eyahlukahlukene ethwala imithwalo esindayo nemiphini ejikelezayo ejikelezayo.
Izinzuzo zethusi non-ayoni yensimbi die ekubunjweni:
- Ibanga lokusakaza elibanzi
- Ukukhiqiza okuphezulu
I-OEM yethusi elenziwe ngensimbi engeyona eyensimbi yokuphonsa insimbi-China Shanghai ithusi engeyona insimbi yensimbi yokuphonsa izingxenye zomlingisi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ukucacisa okuphezulu kwe-brass die-casting ngekhwalithi ezinzile nethembekile kungacutshungulwa. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini wokufa okwenziwe ngethusi. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yethusi yokufa ifa ngokuqinile ihambisana namazinga ekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana wezingxenye zethusi zokuphonsa kumakhasimende ethu abalulekile.
Yikuphi ukusetshenziswa izingxenye zethusi die-ekubunjweni izingxenye
Izinzuzo ze-Ouzhan Brass Die Casting Service
- Yonke imikhiqizo yokuphonsa ngokunemba yethusi ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza ngokunemba izingxenye zethusi ezifayo.
Langaphambilini I-OEM yensimbi engenasici ejika izingxenye ngokwezifiso
Olandelayo: Izingxenye zethusi ezenziwe ngokwezifiso